Courageous Tenants Point the Way - McKnight Foundation
Kiraystayaasha Qadiyaadka ah Tilmaan Jidka
By Kate Wolford, Lee Sheehy
Kiraystayaasha koonfurta Minneapolis waxay dhawaan ku guuleysteen muhiim guusha in la raaco caddaaladda. Waxay noqon kartaa kiiskii ugu dambeeyay ee lagu muujiyo xaaladaha guryaha aan caadiga ahayn ee kireystayaasha dakhligoodu yar yahay, laakiin dhib ma ahan xaalad gooni ah.
Xitaa sida aan ku dhiirrigelinno go'aanka maxkamaddan, waa in aan aqoonsannaa in dacwooyinka kaliya aysan abuuri karin isbeddel nidaamsan iyo xaaladaha suuqa oo kordhin doona helitaanka cadaalad ah ee guryaha kirada ah oo la awoodi karo. Si taas loo gaaro, waa in aan diirada saarnaa guul darrooyinka suuqa kireysiga iyo baahida dadka ku dhex jira.
Kiraystayaasha waxay ka kooban yihiin kala badh dadka degan Magaalada Minneapolis. Culeyska kireysiga ee suuqa guryaha oo xooggan, oo ay weheliso dakhliga joogtada ah ama hoos u dhacaya, marna ma sii culus. In ka badan 50 boqolkiiba kireystayaashu waxay ku qaataan in ka badan saddex meelood meel ka mid ah dakhligooda guriyeynta. Caansanaanta kharashka badani, oo ay weheliso dhaqdhaqaaqyada faa'iidada leh ee mulkiilayaasha qaarkood, waxay u horseedi karaan qoysaska aan lahayn meel ay ku noolaadaan. Qaar ka mid ah codadka Minneapolis ee ZIP-ka, ayaa daan-guraynaya 46 boqolkiiba guryaha qoysaska kireeya ay la kulmeen dacwad guri ka saarid saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Buug cusub oo indhaha furan Hantid, Matthew Desmond wuxuu ku dooday in suuqyadani ay ku fashilmeen inay keenaan cawaaqib xumo qoysaska iyo beelaha. Wuxuu soo gabagabeeyay, "Ka saariddu waa sabab, maaha kaliya xaalad, saboolnimo."
Maxay qaadanaysaa si ay udhaqaaqdo si caddaalad ah oo loo helo guri kiro ah oo la awoodi karo?
Fiiri daaweynta la yaqaan
Warka fiicani waa in xallinta si fiican loo gaari karo. Tallaabada ugu horreysa waa in la eego daaweynta la yaqaan oo si fudud loo dhiso guryo la awoodi karo. Dhisidda waa hubaal istiraatiijiyad muhiim ah, oo sidoo kale waa kabid. Si kastaba ha ahaatee, si cad ayaa loo caddeeyaa, si kastaba ha ahaatee, ma dhisi karno ama aan kabaabin karno habka aan uga baxeyno dhibaatadan. Duqa Magaalada Betsy Hodges ayaa dhawaan sheegay, tan iyo 2000, Minneapolis ayaa ka luntay 10,000 oo guri oo la awoodi karo qoysaska dakhligoodu ka hooseeyo $ 43,000 sannadkii.
Maxaa ka maqnaa wadahadalku waa xaqiiqda ah in inta badan qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa culus ee ku nool guryo ay bixiyaan waaxda gaarka loo leeyahay, ee maaha guryo ay bixiyaan kooxaha samafalka ama dawladda. Taasi waa sababta aan u baahannahay inaan si toos ah u eegno hagaajinta helitaanka iyo tayada hanti ma guurtada ee gobolka oo dhan. Tirada sii kordhaysa waxay noqon kartaa mid aan khasaare ahayn ama khatar ku ah helitaanka beddelaad kiro ah, taas oo markaa ka daali doonta deganayaasha dakhliga hoose iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Ka shaqeynta qaybta ganacsiga gaarka ah iyo maalgashadeynta suuqyadani waxay ilaalin kartaa awood-siinta muddada dheer.
Waa in aan aqoonsanno in guriyeyn ku filan oo la awoodi karo ay qayb muhiim ah ka tahay is-bedelka guusha-gobolka oo idil iyo dhammaan dadkeeda meel kasta oo ay ku nool yihiin, shaqeeyaan ama ciyaaraan.
Qof kastaa wuxuu leeyahay door ah inuu ciyaaro. Dawladaha hoose waxay wax ka baran karaan milkiilayaasha guryaha iyo kireystayaasha xuquuqdooda iyo masuuliyadahooda, waxayna ku siin karaan ruqsadda iyo kormeerka kormeerka, kormeerka waqtiga, iyo fulinta marka loo baahdo. Xaafadaha ayaa isku duubi kara oo u doodaya kiraystayaasha, inay la shaqeeyaan madaxda milkiileyaasha guryaha iyo magaalooyinka oo ah wada-hawlgal, iyo inay kor u qaadaan bulsho soo-dhaweyn leh dhammaantood. Milkiilayaashu waxay ula dhaqmi karaan kiraystayaashooda si sharaf leh, sida sharcigu ugu baahan yahay, iyo inay la shaqeeyaan magaalada iyo bulshada; in si kale loo sameeyo kicin sharciyo badan iyo shaki ku saabsan ganacsigooda oo dhan. U doodaha sharciga iyo maxkamadeynta sii kordhaysa ee cusub ee guryaha ayaa ka caawin kara dhinacyada in ay ka fogaadaan dacwad aan loo baahnayn oo hubina in cadaaladdu ay tahay mid cadaalad ah oo deg deg ah si ay u ilaaliso qoysaska oo ay u qabato xisbiyada la xisaabtamaya.
Iskaashatadu waa isbeddel
Waxaan ku faraxsanahay qaar ka mid ah dadaalada horey u socdey si loo hormariyo habkan wadajirka ah ee Minneapolis. Waxaan aragnay sida isbeddelka ay noqon karto marka xaafadaha, milkiilayaasha, dawlada, u doodaha, adeegyada sharciga iyo maxkamaduhu ay isu yimaadaan si ay midba midka kale wax uga bartaan. Ururada sida HousingLink waxay taageero siiyaan kireystayaasha iyo mulkiilayaasha, iyo sidoo kale dariiqa suuqa kireysiga oo hufan oo diirada saaraya guryaha tayada leh ee tayada leh oo dhan. Waxaan dooneynaa in aan sii wadno taageerada shaqadan waxaanan ku dhiirigelinaynaa dadka kale inay bartaan khibradahaas.
Haddii gobolkayaga iyo gobolka ay tahay in ay koraan oo barwaaqoobaan, waa in aan aqoonsanno in guriyeyn ku filan oo ay ku haboon tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah isla'egta guusha-gobolka oo idil iyo dhammaan dadkeeda oo dhan meel kasta oo ay ku nool yihiin, shaqeeyaan ama ciyaaraan. Guryaha joogtada ah micnaheedu wuxuu yahay in carruur badani ay ku fiicnaan doonaan dugsiga, waalidkoodna waxay helayaan tallaabooyin fiican si ay u sii wadaan shaqadooda iyo ka baxsiga wareegga saboolnimada. Tani, marka hore, dhammaan waxtar ayaa naga hela.
Marka la xaqiijiyo guusha ay gaareen maxkamadda guryaha, kireystayaasha iyo asxaabtoodu waxay ku dhiirigeliyeen inay keenaan dhibaato aan la arki karin oo iftiin leh. Hadda waxaan u baahan nahay xikmad wadajir ah si aan u gutno qaybteena si aan u hubino helitaanka cadaalad ah, tayada, iyo fursado ballaaran oo loogu talogalay guryo badan oo la awoodo oo ku baahsan gobolka oo dhan.
Qeybtan ayaa markii hore la daabacay Minneapolis.
Warbixinta Iskaashatada Guriyeynta ee Minnesota: "Out of Out"
Star Tribune: Suuqa Suuqa ee iibsadaha ayaa wadaa baabuur wadooyinka jaban ee magaalooyinka Twin
Star Tribune: Kooxaha Twin Cities Group Waxay Abuuraan $ 25M Fund si loo ilaaliyo Guryaha La Gubo